Somaliland ma Sharcigaa sareeya mise Qabiilka, maxaase uga meel yaalla shaqsiyaadka dalkoodu Hooyo khaayimay,ee kuwii shalay xasuuqay u shaqo tagay
Somaliland ma Sharcigaa sareeya mise Qabiilka,maxaase uga meel yaalla kuwa dalkooda khaayimay ee Muqdisho xilka u doonta,ka dibna cafis soo dalbada!
Dhammaan akhristayaasha sharafta iyo qadarinta naga mudan,walaalayaal waxaan idinku salaamaynaa salaanta islamka Ascww.Sida aan la wada soconno,baryan danbe waxaa iska soo daba dhacaya shaqsiyaad xilal ka hayay xukuumada Somaliya,oo markay xilkii waayeen,ama xaaladu ku adkaatay,ee la quudhsaday,ee karaamadoodii dhu lka la jiiday,cafis soo weydiista kolba xukuumada markaa joogta,oo iyagoo dhoola cadaynayana Madaarada Som aliland ka soo dega!!!!!
Maah maah Somaliyeed ayaa tidhaa ,"Nin soori kaa qaaday,waa nin seefi kaa qaaday," shaqsiyaadkan ayaa ku si foobay kuwo Hungurigoodu u fakiro,dhuunta wax ka maqla, indho u yahay,oo marka Villa Somaliya luqmad laga lulo, habeen madaw guda, ka dibna ka hilaaca Muqdisho!!!
Dhacadadani waxay noqotay waddo Halaq,oo intay Somaliland jirtay soo jiitamaysay,caalamkana kama ma jirto meel qof waddankiisa khaayimay,aanu lahayn Xeer Ciqaabeed la mariyo.Somaliland ma Sharcigaa sareeya, mise Q abiilka,maxaase uga meel yaalla kuwa dalkooda khaayimay ,ee Muqdisho xilka u doonta,ka dibna cafis soo dalbad a,muddo intee leeg bayse sii socon doonaa!!!!
Fadlan ,fikradaada ka soo dhiibo,oo noogu soo hagaaji: Timacadenews@Gmail.com